Sida loo abuuro, samaynta iyo Bedelka iPhone Ringtone
3. Lugood File Sharing Ringtone
Mararka ay dhacdo in user helo daalay ringtone isku jir ah in saxmadda iPhone mar kasta wac ama fariin la helay. Sidoo kale ku dhawaad ​​80% ka mid ah dadka isticmaala ay doonayaan in ay hubiyaan in ay song jecel ayaa lagu wadaa sida ringtone default ah dukaamada waaweyn ah si ay u raaxaysan kartaa telefoon kasta. Si aad u hesho users ka soo ringtones caajiso waxaa jira farsamooyin badan oo la soo saaray arrintan la xiriira in la hubiyo in user ka heli kartaa natiijada ugu wanaagsan iyo wareejin karaan ringtones oo aan wax dhibaato ah. Farsamada fudud oo toos ah waxaa ka mid ah Abuuridda ringtones dhamaystiran isticmaalka Lugood oo waxaa la dhaqma dadka isticmaala badan oo adduunka oo dhan si loo hubiyo in ugu fiican in la siiyo ka dibna arrintan la xiriira iyo Apple Inc. waxaa sidoo kale ka shaqeeya kasta version of Lugood si loo hubiyo in dadka isticmaala ku raaxaysan kartaa habkaani la shaqeynta xitaa sare iyo guud ahaan arrin waa wakhti weyn. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican waxaa lagula talinayaa inay raacaan talaabada tutorial this talaabo si ay arrinta lagu waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira. Farsamooyinka kala duwan ayaa lagaga wada hadlay si faahfaahsan weyn si user ah ka heli kartaa in aqoon qoto dheer oo aan samayn karo xasilloon waxa jidhku si fudud.
Qaybta 1. Samee iPhone Ringtones in Lugood, hadiyad Qaybta 2. Download iyo rakibi Kan sameeyey Ringtone inaad computer Qaybta Kan sameeyey 3. Download Ringtone APP inaad iPhone Qaybta 4. Transfer ka computer si iPhone cusub oo la isticmaalayo TunesGo Qaybta 5. Transfer ka iPhone in computer isticmaalaya TunesGo
Qaybta 1aad: In la abuuro iPhone Ringtones in Lugood si xor ah
Tani waa habka lacag la'aan ah in user a codsan kartaa in ay sameeyaan wax kasta oo song ringtone ee mobile iyo sabab la mid ah waa mid aad u fudud in ay fuliso in arrintan la xiriira. Si aad u hesho natiijooyinka sida rabitaan waxaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in nooca ugu dambeeya ee software Lugood ayaa lagu rakibay si user ah u isticmaali kartaa shaqeynayaan feature buuxa oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Geedi socodka la xiriira in ay tahay in la isticmaalo arrintan la xiriira ayaa la soo sheegnay hoos ku qoran talaabo talaabo ah si loo hubiyo in user marnaba uu wareersan.
1. user ugu horreeya oo dhan u baahan yahay inuu ogaado taas oo qayb ka mid ah madaxdii gabayga oo loo baahan yahay sidii ringtone ah. Waxaa la samayn karaa iyadoo la dhagaysto song gudahood Lugood dibna xulashada qayb ka mid ah.
2.Beerta song markaas waa in la xaq u riixi si menu u muuqataa ka meesha aad u hesho info waa in la soo xulay.
3.On shaashadda soo socda user u baahan yahay si loo hubiyo in waqtiga bilowga iyo dhamaadka madaxdii gabayga oo la soo xulay hoos tab ikhtiyaarka.
4.The user markaas u baahan yahay in la abuuro version AAC gabayga oo ah in ay sii wadi arrintan la xiriira.
5.The info gabayga oo mar kale waa in la soo qaateen si ay isbeddel la xidhiidha fidinta waxaa la samayn karaa.
6.The kordhin oo ka mid ah tusaale ahaan hees cusub oo dhererkeedu yahay ee la doortay waa in la bedelo si. m4r.
7.The version gaaban ee heesta waxaa ka dibna in la tirtiro ka playlist Lugood ah.
8.The song waxaa markaas in la furay sahamisa daaqadaha sida ka muuqata shaxanka hoose.
Midab 9.The markaas waa in la synced si iPhone.
10. Mar haddii samaysay ringtone ee lagu hagaajin karo on iPhone.
Qeybta 2: Download iyo rakibi Kan sameeyey Ringtone to aad computer
Habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah si loo hubiyo in gaare ringtone u shaqeeyo telefoonka waxaa lagu talinayaa in la raaco habka hoose.
User 1. leeyahay in ay soo booqdaan http://friedcookie.com soo bixi gaare ringtone ah. Waa in lagala soo bixi oo lagu rakibay si interface soo socda u muuqataa taas oo loo isticmaali karaa in si toos ah hoos u faylasha.
2.Once heesta loo doortay tusiyaha orange waa in wax laga beddelo si loo hubiyo in qayb ka mid ah qaar ka mid ah madaxdii gabayga oo la doorto sida ringtone ah.
Software 3.Beerta markaa ka codsan doonaan nooca telefoon halkaas oo user leeyahay in uu doorto iPhone ah.
4.Select goobta nuqul la doonayo.
5.Click "abuuri karto ringtone" button dhammayn nidaamka.
Qeybta 3: Download Ringtone Kan sameeyey APP inaad iPhone
Geedi socodka ah ee la abuurayo ringtone dhex app waa sida soo socota.
User 1. waa in ay soo baxdo iyo rakibi codsiga gaare ringtone lacag la'aan ah iPhone ka dib raadinaya ka dukaanka App. URL Internetka codsigan waa http://ringtonemakerapp.com/ iyo interface waa sida soo socota.
2.After siyoodba shaashadda weyn daaqadaha songs arbushin doonaa si toos ah.
3.Once heesta ayaa lagu qabtay user markaas u baahan yahay in la hubiyo in bilowga iyo dhamaadka sliders haboon in ay doortaan qaybta song in uu yahay in sida ringtone ah loo doortay.
4.Once sliders waxaa lagu soo xulay ringtone-da loo abuuray si toos ah.
5.The dhinaca midigta hoose ee shaashadda ka dibna in la daah furo si loo badbaadiyo ringtone ah meesha uu doonayo.
Habka 6.The ayaa lagu dhameeyey iyo sidoo user in ay dadka kale ee ku wareejin kartaa ringtone ah.
Qeybta 4: Transfer ka computer si iPhone cusub oo la isticmaalayo TunesGo
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in geedi socodka soo socda waxaa la socda talaabo talaabo ah si looga fogaado in dhib kasta oo arrintan la xiriira.
1. maxkamad version of software-ka waa in la soo bixi URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ oo ku rakiban. Marka la sameeyo user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in software ah waxaa maamula si ay u helaan suuqa kala ugu weyn.
2.Beerta iPhone markaas waa in lagugu xiro PC si ay barnaamijka si toos ah ogaadaa.
3.Beerta user markaas u baahan yahay inuu ka jaftaa warbaahinta ka guddi bidix iyo music sida uu furmo suuqa caadiga ah.
Ringtones 4.The ay tahay in la soo xulay oo button add waa in la sii adkeeyey.
5.From suuqa kala socda user ay u baahan tahay in ay doortaan iPhone kadibna riix furan si aad u dhamayso ee buuxa.
Qeybta 5: Transfer ka iPhone in computer isticmaalaya TunesGo
Tallaabooyinka oo user u baahan yahay in la raaco waa isku mid sida ku xusan nidaamka ku xusan. Farqiga u dhexeeya waa in tallaabadii u dambaysay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button dhoofinta la isku soo riixayo halkii add oo uu furmo suuqa cusub pop up PC ama computer ku salaysan meesha uu la doorto inay u dhoofiyaan ringtones ka iPhone in computer.
> Resource > Windows > Sida loo abuuro iyo Bedelka iPhone Ringtone